I-Next Generation CDN Technology imayelana nokuNgaphezulu kokulondolozwa kwesikhashana | Martech Zone
I-Next Generation CDN Technology ingaphezu nje kokulondolozwa kwesikhashana
Ezweni lanamuhla elixhunywe nge-hyper, abasebenzisi abayi ku-inthanethi, bahlala ku-inthanethi, futhi ochwepheshe bezentengiso badinga ubuchwepheshe obusha bokuletha umuzwa wekhasimende osezingeni eliphakeme. Ngenxa yalokhu, abaningi sebevele bazijwayele izinsizakalo zakudala zefayela le- inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe (CDN), njengokulondolozwa kwesikhashana. Kulabo abangajwayelene nama-CDN, lokhu kwenziwa ngokugcina okwesikhashana imibhalo, izithombe, okulalelwayo nevidiyo kumaseva, ngakho-ke ngesikhathi esilandelayo lapho umsebenzisi ezofinyelela khona lokhu okuqukethwe, kuzothunyelwa ngokushesha kunokuba bekufanele ayilondoloziwe.
Kepha lesi yisibonelo esisodwa nje esiyisisekelo salokho i-CDN okufanele ikunikeze. Abakhangisi basebenzisa ama-CDN esizukulwane esilandelayo ngezindlela eziningi zokuxhumana nezethameli futhi banqobe izinselelo zokunikeza isipiliyoni samakhasimende esingenamthungo kuwo wonke amadivayisi amaningi, ukuxhumana okuhlukahlukene kanye nezinhlelo zokusebenza zewebhu eziyinkimbinkimbi.
Nayi eminye imisebenzi ebalulekile eyenzelwe ukuthuthukisa umuzwa wamakhasimende:
Ukuphendula Kweseva Eseceleni (RESS)
Ngokungeziwe ezikhathini zokulayisha ikhasi elifushane, ukusebenzisa ubukhona bakho bewebhu ngamadivayisi ahlukene kudingekile impela ukudala okwenziwa amakhasimende okuhle kakhulu. Ukusebenzisa ukwakheka kwewebhu okuphendulayo (RWD) kungaba yindlela ephumelelayo yokusiza ukwenza lokhu. Isibonelo, i-RWD iqinisekisa ukuthi lapho umthengi ongumakhalekhukhwini noma ithebhulethi evakashela iwebhusayithi, izithombe ziyamanzi kanti ezinye izimpahla zikalwa ngokufanele, ngakho-ke abasebenzisi abazami ukuzulazula kunguqulo yedeskithophu yewebhusayithi ngokuchofoza nokusondeza. Kodwa-ke, i-RWD inokubheda kokuthi ingathambekela ekulandeni ngokweqile ngoba ithumela izithombe ezifanayo ne-HTML kudivayisi yeselula eyithumela kwideskithophu. Kusetshenziswa i-RWD enezici zedivayisi enqenqemeni amasayithi angenza okuqukethwe okulethwe kumaqembu wamadivayisi futhi kwehlise ngokuphawulekayo usayizi wokulanda kwekhasi futhi kwandise ukusebenza.
Ukucindezela kwesithombe okuguqukayo
Ngenkathi i-RWD izokwenza izithombe zibe uketshezi ukuze zilingane kahle ngokususelwa kusayizi wesikrini sedivayisi, zisazosebenzisa isithombe sosayizi ofanayo njengoba kukhonjisiwe kwideskithophu. Lokhu kungasho ukuthi abasebenzisi bakho kuma-3G ahamba kancane noma amanethiwekhi aphezulu we-latency ayadingeka ukulanda isithombe esingama-megabyte amaningana kuphela ukuze siboniswe kubo ngosayizi wesitembu osithumele. Isixazululo ukuthumela umsebenzisi kuphela ubukhulu besithombe esifanele izimo zabo zenethiwekhi zamanje. Ukucindezelwa kwesithombe okuguquguqukayo kufeza lokhu ngokucabangela ukuxhumana kwamanje kwenethiwekhi, ukubambezeleka kanye nedivayisi bese kucindezela isithombe ngesikhathi sangempela ukunikeza ibhalansi phakathi kwekhwalithi yesithombe nesikhathi sokulanda ukuqinisekisa ukuthi abasebenzisi banokufinyelela kuzithombe ezisezingeni eliphakeme ngaphandle kokuhlushwa ukusebenza kancane .
I-EdgeStart - Sheshisa isikhathi nge-byte yokuqala
Kalula nje, uma ulondoloze okuqukethwe okulondoloziwe kuphela, uphuthelwa yizinzuzo eziningi zendlela yesikhulumi esihlakaniphile. Abamakethi kumele babe nobuchwepheshe obufanayo nobufuna ubuchwepheshe njengabathengi babo uma befuna ukuphumelela. Futhi uma lokhu kubonakala njengenqubo exakile, akudingeki kube njalo. Kukhona ochwepheshe abakhona ukukusiza ukukuholela ezinsizakalweni ezifanele ezihambisana nezidingo zenkampani yakho nezabasebenzisi bakho bokugcina.
Tags: akamaiedgestartukwenza kahle phambiliisivinini sekhasiuhlangothi lweseva oluphendulayoizinsalelaisivinini sesizaijubane
UJason Miller uyiChief Strategist of Commerce ku Akamai Technologies, i-Akamai Intelligent Platform enikeza abasebenzisi bayo ukusebenza kwewebhu, ukusebenza kweselula, ukuphepha kwamafu kanye nezixazululo zokulethwa kwemidiya ukuze kulawulwe ubunzima obunzima bamabhizinisi aku-inthanethi, nokufinyelela kunethiwekhi yamaseva angaphezu kwe-170,000 emhlabeni wonke.
Okuqukethwe kwekhwalithi vs Ubuningi: I-ROI ekubhaleni okuncane
Ama-40Nuggets: Bandakanya futhi uguqule ngaphandle kwezivakashi ezicasulayo